Dowladda Somalia oo mar kale digniin ka soo saartay abaaro iyo biyo la’aan ka jirta gobolada dalka qaarkood
BAAQ KU WAAJAHAN XAALADAHA ABAARAHA DALKA
1. Golaha Wasiirrada Xukuumadda Fedeeraalka Soomaaliyeed waxaa uu shir aan caadi ahayn Guddiga Gurmadka Degdegga kaga dhageystay warbixintii ugu dambeeysay ee ku saabsanayd xaaladda abaaraha iyo cunto-yarida dalka ka taagan.
1. Goluhu waxaa uu ku dhawaaqayaa in gobollada hadda ugu daran xagga saameynta abaaraha ay yihiin Gedo, Bakool, Hiiraan, Galgaduud iyo Mudug, xaaladaha bani’aadamnimana ay ku sii kordheeyso maalinba maalinta ka dambeeysa. Baahida dadka tabaaleysan waxay isugu jirtaa biyo, cunto iyo gargaar caafimaad.
2. Xukuumadda oo u qoondeeysay lacag dhan 500,000 doollar, waxa ay toddobaadka soosocda ka bilaabeysaa biyo-dhaamin gobollada harraadka uu ka taagan yahay. Waxaa kaloo xukuumadda u qorshysan in sida ugu dhakhsiyaha badan gaargaar cunto lala gaaro dhammaan gobollada cunt-yarida ay ka jirto.
3. Xaaladda amnidarro ee ka dhashay jidgooyada argagixisada ay ku hayso gobollada abaarta iyo cunt-yarida ka jiraan waxa ay carqalad ku tahay qorshaha hawlgalka gurmadka. Waxaa kaloo Xukuumadda u muuqatay in AMISOM ayan weli jawaab ka bixin codsiyo fududayn gaarsiin cuto deg-deg ah oo loogu talagalay dadka ku nool gobollada tabaaleeysan.
4. Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay in uu u adeego dadwenihiisa, hase yeeshee ma haysto qalab ku filan oo uu keli ahaan uga soo baxo waajibaadka gelbinta gawaarida raashiinka gurmadka wadda.
5. Xukuumadda waxa ay u mahadcelineysaa dowladaha iyo hay’adaha durba ku dhaqaaqay gurmad degdeg ah iyagoo ka jawaabay baaqii ay hore u soo jeedisay Xukuumadda; arrintaasina waa mid dhiirrigelin leh.
6. Xukuumadda waxa ay AMISOM iyo deeq-bixiyeyaasha ugu baaqaysaa in ay gacan ku siyaan Xukuumadda xil-gudashadeeda si dalka looga badbaadiyo khatartii abaarihii 2011 oo kale. Waxaa loo baahan yahay in hadda si xoog leh loogu jeesto hawlaha gargaarka inta arrinta ayan gaarin heer aad u ba’an oo macaluul iyo dhimasho ay dhacdo.